एफडीएले ओएसरेभसलाई एमएस उपचारको लागि अनुमोदन गर्दछ - समाचार | सेप्टेम्बर 2021
औषधि जानकारी, समाचार मनोरञ्जन भारी खेल स्वास्थ्य शिक्षा, समाचार समाचार औषधि जानकारी कम्पनी, स्वास्थ्य शिक्षा खेलहरु कम्पनी, चेकआउट चेकआउट समुदाय, कम्पनी औषधि जानकारी, स्वास्थ्य शिक्षा स्वास्थ्य शिक्षा, घरपालुवा जनावर घरपालुवा जनावर स्वास्थ्य
मुख्य >> समाचार >> एफडीएले बहु स्क्लेरोसिस उपचार ओक्रिएभसलाई अनुमोदन गर्दछ
एफडीएले बहु स्क्लेरोसिस उपचार ओक्रिएभसलाई अनुमोदन गर्दछ
१ 199 199 Until सम्म, जब इन्टरफेरोन बीटा -१ बी पहिलो थेरेपीको रूपमा स्वीकृत भयो, मल्टिपल स्क्लेरोसिस (एमएस) को लागी कुनै उपचार थिएन। मार्च २०१ March मा, संयुक्त राज्य खाद्य र औषधि प्रशासन (एफडीए) अनुमोदन गरियो Ocrevus (ocrelizumab), जसले एमएस भएका मानिसहरूलाई नयाँ आशा ल्यायो। एफडीए अनुमोदित भएदेखि ओकरेभसले धेरै आश्वासन देखाएको छ।
nexplanon लाई काम सुरु गर्न कति समय लाग्छ?
मल्टिपल स्क्लेरोसिस भनेको के हो?
त्यहाँ छ बहु sclerosis को लागी ज्ञात कारण छैन । त्यहाँ एक व्यापक विश्वास छ कि एमएसमा एकल कारक छैन जसले यो कारण बनाउँदछ, बरु बहु कारकहरूको परिणाम हो। अझै, एमएस लाई एक अटोइम्यून रोगका रूपमा लिइन्छ, यसको मतलब शरीरले शरीरको सामान्य अ recognize्गलाई चिन्न सक्दैन र यसलाई आक्रमण गर्छ, यो विदेशी हो भन्ने सोच्दै। एमएसले women वा to देखि १ अनुपातमा पुरुषहरू भन्दा उल्लेखनीय रूपमा महिलालाई असर गर्दछ। यद्यपि यो कुनै पनि उमेरमा निदान गर्न सकिन्छ, एमएस प्रायः २० देखि 40० बर्ष बीचमा निदान गरिन्छ।
ओक्रिभस भनेको के हो?
कुनै उपचारको साथ, वर्तमान एमएस उपचार विकल्पहरू आक्रमणबाट रिकभरीको गतिमा, रोगको प्रगतिलाई ढिलो बनाउने, र लक्षणहरू नियन्त्रणमा केन्द्रित गर्दछ। त्यहाँ छन् चार प्रकारको एमएस , तर दुई थप सामान्य प्रकारहरू र्याप्से-रेमिटि MS एमएस (आरआरएमएस) र प्राइमरी-प्रोग्रेसिभ एमएस (पीपीएमएस) हुन्, जुन सँगै एमएस निदानको%%% हो। Ocrevus एक मात्र औषधी हो जुन उपचार गर्दछ दुबै RRMS र PPMS, मतलब कि एमएस संग 95%% व्यक्ति उपचार को लागी यस औषधि मा विचार गर्न सक्छ।
Ocrevus एक एकल एन्टिबडी को रूप मा काम गर्दछ त्यो विशिष्ट बी-कक्षहरूमा बाँधिन्छ। धेरै जसो बी-सेलहरू एन्टिबडी बोक्छन् CD20। CD20 ले शरीरबाट प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया स्पार्क गर्ने सोचाइ राख्दछ, यसले शरीरको स्नायु प्रणालीको अंगहरूमा आक्रमण गर्दछ। जब CD20 एन्टिबडी बोक्ने बी-सेलहरूमा बाध्यकारी हुँदा, ओक्रिएसले त्यो प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया रोक्छ र यसरी स्नायु प्रणालीको बिघटन रोकिन्छ जसले अन्ततः एमएस भएका मानिसहरूलाई अशक्तता निम्त्याउँछ। Ocrevus केवल यी सेलहरूमा बाँध्छ, र प्लाज्मा कोषहरू र स्टेम सेलहरू होइन, ताकि बिरामीको सम्पूर्ण प्रतिरक्षा प्रणाली प्रभावित हुँदैन।
Ocrevus कसरी प्रशासित छ?
Ocrevus प्रत्येक छ महिनामा अंतःशिरा द्वारा प्रशासित हुन्छ। प्रारम्भिक mg०० मिलीग्राम खुराक दुई अलग 300०० मिलीग्राम खुराकको रूपमा दिइन्छ, २. hours घण्टा भन्दा बढीमा दुई हप्ताको दूरीमा दिइन्छ। पहिलो खुराक पछि, प्रत्येक खुराक एक 600०० मिलीग्राम खुराक हो, तीन घण्टा अवधिमा प्रशासित। यसले Ocrevus प्रयोग गर्ने बिरामीहरूको लागि चिकित्सा सुविधाजनक बनाउँछ। द्विवार्षिक आधारमा ईन्जेक्सनहरूको लागि जानु पर्ने अन्य उपचार विकल्पहरूको तुलनामा धेरै कम बोझ हुने आवृत्ति हो। बारम्बार औषधी (जस्तै एन्टीहिस्टामाइन र / वा स्टेरोइड) ओक्रेभसको अगाडि ओर्क्रुसको अगाडि दिइनेछ औषधीबाट एक प्रतिक्रिया रोक्न।
Ocrevus का दुष्प्रभावहरू के छन्?
सम्भावित Ocrevus का दुष्प्रभाव प्रशासनको बखत समावेश:
माथिल्लो र तल्लो श्वसन पथ संक्रमण
34 34% -40०% बीचमा बिरामीहरूले क्लिनिकल परीक्षणको बेला एक जलसेक प्रतिक्रिया विकसित गरे। यी लक्षणहरू पहिलो इन्फ्यूजनको बखतमा देखा पर्दछ र त्यसपछिको इन्फ्यूजन प्रतिक्रियाहरूको जोखिम त्यस पछि घट्छ। बिरामीहरूलाई कम्तिमा एक घण्टा निगरानी गरिनुपर्दछ इन्फ्यूसन पछि एक इन्फ्यूजन प्रतिक्रिया २ 24 घण्टा भित्र हुने भए पनि।
Ocrevus कति खर्च हुन्छ?
Ocrevus मार्च २ 28, २०१ on मा एफडीए द्वारा अनुमोदित भएको थियो , र त्यसको केही समय पछि उपलब्ध थियो। एमएस उपचार द्वारा निर्मित छ Genentech । Ocrevus उपचार को लागी वार्षिक सूची मूल्य $ 65,000 थियो। बीमा कभरेज प्रदायकबाट प्रदायकमा फरक हुनेछ, तर तपाईं जहिले पनि आफ्नो एकलकेयर कार्ड प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ तपाईंको बचत गर्न Ocrevus प्रिस्क्रिप्शन ।
बीमा बिना चिकित्सा सहायता कसरी प्राप्त गर्ने
strattera तपाइँ adderall जस्तै ऊर्जा दिन्छ
घर मा वयस्क मा कान को दुखाई को लागी
म एक दिन मा कति mg ibuprofen लिन सक्छु
कसरी वजन घटाने को लागी linzess को उपयोग गर्ने
के कम रक्त शर्करा मानिन्छ